भारतबाट भोट हाल्न घर आएका श्रीमानलाई बिदाई गर्दा श्रीमती मुर्छा परिन् – Rastriyapatrika
भारतबाट भोट हाल्न घर आएका श्रीमानलाई बिदाई गर्दा श्रीमती मुर्छा परिन्
rastriyapema | December 3, 2017 | Comments
डीबी विष्ट/उज्यालो बझाङ, मंसिर १७ – बझाङमा एक महिला रोजगारीका लागि भारत जान लागेका श्रीमानलाई बिदाई गर्ने क्रममा मुर्छा परेकी छिन् । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भोट हाल्नका लागि मंसिर पहिलो साता भारतको बेंगलोरबाट घर आएका मष्टाका शंक विक शनिबार बेंगलोरतिर हिँडेपछि चैनपुरको बस पार्कमा उहाँकी श्रीमती मुर्छा पर्नुभएको छ ।
तीन घण्टा हिँडेर श्रीमानलाई बसपार्कसम्म पुर्याउन आएकी कन्जु विक श्रीमान बसमा चढेर भारतको बाटोतर्फ लागेपछि बीच बसपार्कमा नै रुँदा रुँदै मुर्छा पर्नुभएको हो । ३ जना छोराछोरी रहेका उनीहरुको घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण विकका श्रीमान रोजगारीका लागि भारत जानुभएको हो ।
१२ महिना काम गरेर ३ महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि छोराछोरीको पढाई खर्च जुटाउनका लागि आफूले भारतमा गएर मजदुरी गर्नु परेको विकले गुनासो गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भोट हाल्न भारतको बंलोरबाट घर आएका विक करिब २ महिना मात्र घर बसेका थिए । झण्डै ४ वर्षपछि भारतबाट घर आएका विक पुन भारत नै हिडेपछि उहाँकी श्रीमती मुर्छा पर्नुभएको हो ।
श्रीमान विदेशीएसँगै घरको सम्पूर्ण जिम्मा श्रीमतीको काँधमा परेको छ । छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने ? लालन पालन कसरी गरौला ? म एक्लै कसरी बसौला ? भन्दै बसपार्कमा विलौना गर्दा गर्दै उहाँ मुर्छा पर्नुभएको हो । केही समय बेहोस भएकी
कन्जुदेवी विकलाई उहाँका आफन्तले बसपार्क नजीकै रहेको होटलबाट पानी ल्याएर मुखमा छर्केपछि होसकमा आउनु भएको थियो । विक होसमा आएपछि उहाँका आफन्तहरुले हातमा समातेर घरतर्फ लगेका थिए । घर जाँदै गर्दा पनि उहाँले रुन छोड्नु भएको थिएन ।
पाखो जमीनमा उब्जनी नहुने, आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने तथा भौगोलीक विकटताका कारण १२ महिना काम गरेर ३ महिना पनि पूरा खान नपुग्ने भएपछि रोजगारीका लागि बझाङका युवाहरु एक दिनमा सदरमुकाम चैनपुरबाट झण्डै
३०० भन्दा बढी भारत जाने गरेको सुदुरपश्चिम बस व्यावसाय समितिका जिल्ला इन्चार्ज दिपक बहादुर कठायतले बताउनुभयो । केही युवाहरु परिवारसहित जाने गरेका छन् । केही परिवारमा सबैलाई छोडेर एक्लै रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर जाने गरेको दिपकले बताउनुभयो ।
‘बसपार्कमा रुवावासी गर्ने र मुर्छापर्ने सामान्य जस्तै भएको छ । पवनदुत यातायात बस व्यावसाय समितिका जिल्ला इन्चार्ज हिक्मत सिंहले भन्नुभयो, कसैसँगै आफन्त पनि आएका हुन्छन् र नरुनु भनेर सन्झाउछन्, कसैको आफन्त नै आएका हुँदैनन् बसपार्कमा नै रुँदा रुँदै मुर्छा पर्छन ।’ सिंह भन्नुहुन्छ–‘उनीहरुलाई कहिले हामीले नै सम्झाएर घर पठाउछौ, कहिले अरु मान्छेले सम्झानुहुन्छ । रुँनु र मुर्छा पर्नु त बसपार्कमा सामान्य भएको छ ।’
आफ्नो घरायसी खर्च जुटाउन र पेट पाल्नका लागि भारतमा भाँडा माझ्ने, कसैका लुगा कपडा सफा गर्ने गाडी सफा गर्र्ने, चौकीदारी गर्ने लगायतका निम्नस्तरका काम गर्न बाध्य हुनुपरेको मष्टा गाउँपालिका –३ का विजय कुमार कठायतले बताउनुभयो । गाउँमा नै बस्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर भोट हाल्न घर आईयो । तर गाउँमा रोजगारीको कुनै उपाए नलागेर भारत नै जानुपरेको कठायतले गुनासो गर्नुभयो ।
नेताहरुले भोट माग्दा निकै ठूला आश्वसन दिए पनि अहिलेसम्म केही पनि पूरा नभएको र भोट हालेको कुनै पनि अर्थ नलागेको कठायतल दुखेसो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले एक गास खान र छोराछोरी पाल्नका लागि भारत नै जानुपर्छ । हाम्रा लागि कसैले केही पनि गरेका छैनन् । गरे पनि आफन्तका लागि गर्लान् । हामीले भारत नै जानुपर्छ । यसरी भारत जानुपर्दा त भोट किन हालें होला जस्तो लाग्छ ।”
चुनावको समयमा विभिन्न रोजगारीको आश्वसन दिए पनि कुनै आश्वसन अहिलेसम्म कुनै नेताहरुले पूरा नगरेको उनीहरुको भनाई छ । कुनै व्यापार व्यावसाय गर्न आफूसँग लगानी नभएपछि छोराछोरीको भविष्य सुधार गर्नको लागि छोराछोरी र श्रीमती सहित आफू भारत जान लागेको कर्मराज खड्कले बताउनुभयो ।
“अब गाउँमा बसेर केही काम गर्नु पर्ला भन्ने सोच बनाएर ३ वर्ष भारत बसेर स्थानीय तहको चुनावमा घर आएको थिएँ । यहाँ नेता तथा उनीहरुका कार्यकर्ताको पहिलाको जस्तै भाषण र आश्वसन मात्र पाईयो । अरु केही गर्न सक्ने स्थिति रहेन् । भारतमा गए महिनाको १० हजारसम्म त कमाउन सकीन्छ ? भारतको विद्यालयमा नै छोराछोरीलाई पढाउने सोचका साथ भारत जान लागेको हुँ ।” खड्काले भन्नुभयो, ‘श्रीमतीले घरमा बस्न नसक्ने भनेपछि छोराछोरीसँगै लिएर भारत जान बाध्य भएको छु ।’
एक दिनमा सदरमुकाम चैनपुरबाट मात्रै सुदुरपश्चिम यातायात, कर्णाली रिभर, पवनदुत यातायात, मालीका यातायात, महाकाली यातायात, साईपाल डिलक्स लगायत ८ वटा बस बाहिरी जिल्ला जान्छन् । यस्तै स्थानीय बजार तमैल, भाँडे, मोरीबगर, झनाना, झोता, बागथलाबाट पनि सबै समितिका बस सञ्चालन हुने गरेका छन् । अहिले एक दिनमा झण्डै ७ सय भन्दा बढी युवा रोजगारीकै लागि भारत जाने गरेको बस व्यावसायी समितिका इन्चार्ज दिपक कठायतले बताउनुभयो । समाचार उज्यालोमा प्रकाशित छ ।